Qurbaha Qof Soomaali ah ayaa isku gubay xabsi uu ku xirnaa – XOGMAAL.COM
Qurbaha Qof Soomaali ah ayaa isku gubay xabsi uu ku xirnaa
“Dhamaan Qooxootigu waxay ku jiraan dareen xun, waxaba ma aanan cunin sababtoo ah Dad badan ayaa dhintay” ayuu yiri Qof ka mid ah Dadkii la xirnaaa Soomaaliga is gubay.
Muwaadin Soomaaliyeed ayaa la soo wariyay in uu isku gubay Xabsi ku yaala Dalka Liibiya Arbacadii lasoo dhaafay, sida lagu xusay war uu daabacay Wargeyska Irish times oo soo xiganaya Dadkii Muwaadinka Soomaliyeed la xirnaa iyo Hey’adda Socdaalka Adduunka.
Ninka Soomaaliga ah oo la sheegay in uu ku jiray Da’diisa 20 aad ayaa waxaa uu isku bil-bilay Nafto uu kasoo qaatay matoor yaala Xarunta uu ku xirnaa waxaa una isku daaray Dab, kadib markii uu u sheegay Saaxiibadiisa Xabsiga ay ku wada jireen in uu waayay Rijadii ahayd in uu dago Dal nabad ah.
Ilo Wareed ayaa The Irish Times u sheegtay in Ninku uu falka ku dhaqaaqay kadib markii loo sheegay in ay yartay fursadda uu ku heli karo in la qaado, hadalkaasna waxaa u sheegay Saraakiil ka tirsan heey’adda Qoxootiga QM ee UNHCR.
Afhayeenka Hey’adda Socdaalka ee IOM Joel Millman in maxuusku uu isku gubay fal gadood ah.
“Waxaa la geeyay Cusbitaal ku yaala Magaaladda Tripoli, kooxdeenna Caafimaadka ayaana Booqatay waxayna u sheegeen maamulka Cusbitaallka in ay caawinayaan hadii ay u baahdaan” ayuu yiri Afayeenka IOM.
Inkastoo Masuulka ka tirsan heey’adda Socdaaalka Aduunka uusan Sheegin in uu dhintay Maxbuuska Soomaaliyeed ee is gubay iyo in kale, hadana Dadkii la xirnaaa ayaa waxay aaaminsanyihiin in muwaadinka Soomaaliyed uu dhintay, sida uu Wargeeyska Warkaan Daabacay sheegay.
Tobanaan kun oo muhaajiriin ah ayaa jooga Wadanka Libiya kuwaas oo doonaya in ay uga sii gudbaan Dalalka Qaaradda Europe oo uu ka xigo safar adag oo badda ah.
Somaali badan ayaa silac iyo saxariir ku mara Dalka liibiya, qaar badan oo kamid ahna waxay gacanta ugu jiraan kooxo arxan daran, Dowladda Soomaaliya ayaase ku guuleeysatay in ay soo celiso Soomaali muddo Dalka Liibiya ku dhibanaa.
Dhageyso:-Xildhibaano Musuq-maasuq iyo fara galin ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo
Sawirro:- Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa guddoomiyay shirka horumarinta Dhaqaalaha.